WAX KA BARO URURKA OPEC ( THE ORGANIZATION OF PETROLEM EXPORTING COUNTRIES) | Toggaherer's Weblog
WAXAA MAANTA MADAARKA MUQDISHO KA SOO DEGAY DONALD PAYNE
Posted by: toggaherer on: April 14, 2009
OPEC wa urur ka dhaxeyaa 12 dal kuwas oo dhoofiya ama iib geeyaa Shidaalka.
Dalka Venezuela ayaa ahaa dalki ugu horeyay ee keentay fikir ah in Dawladaha dhaqlaahooda ku xidhan yahay Shidaalka aay samaystan Urur uu gar ah sanadkii 1949. Waxana ku taageeray fikirkii Venezuela wadamada Iran , Gabon , Libiya ,Kuwait iyo Boqortoyada Sucuudia Arabia.
Sanadkii 1960,bishii October 14 ayaa waxa shir u ka dhacay Magalada Baghdad Casiimada Dalka Iraq.Shirkas waxa ka qayb galay Madaxda iyo Wasirada Shidalka ee wadama Iraq,Iran,Venzeuela,Kuwait iyo Saudia Arabia.
Sababaha iyo ujeedooyinka ka dembaysa kulankas aya aha sidii loo adkaayn ama xoojin laha ganacisga shidalka ee ka dhaxeeya dalalkas lana ilaaliyo,horumar-na lagu samayo qimaha iyo ganacisga petrolka.Natijadii shirkas aya Madaxdasi isla garteen in go’an la soo saro tas oo ah in la dhiso urur ka shaqeeya arimaha kor ku xusan waxana lagu magac daray OPEC “The Organization of Petroleum Exporting Countries”.
Xubnaha OPEC ayaa sii kordhay ka dib markay dalal farabadan aay ku so bireen kuwas oo kala ah Qatar (1961), Indonesia , Libya (1962), Emirates(1967), Algeria (1969) iyo Nigeria (1971).
Dalka Ecuador aya ka baxay ururka sanadki 1992 ka dib marku dalkas u bixini karii wayay 2$ million dollar tas oo ah fee-ga xubinimada.Lakiin sanadki 2007 ayay Ecuador dib ku so noqotay xubinimada OPEC.
Wadanka Angola ayaa ka mida wadamada dhawan ku so biirey OPEC waxanu so galay 2007. Dalalka Russia iyo Norway waxay ka mid yihiin xubnaha aan joogtada ahayn.
Dalka Indonesia ayaa ka baxay ururka marku dalkas ka mid noqday wadamada so deejiya shidalka.Sida sharciga OPEC uu dhigmayo waxa xubin ka noqoni kara dalalka dhoofiya shidalka.Wadamada so dejista lama ogola in ay xubin ka noqdan.
Headquater-ka OPEC ayaa ku tala Magalada Vienna Casimaada dalka Switzerland,xagas oo ay Madaxda iyo Wasiirada dalalka dhoofiya shidalka aay isku yimadan,shirarna ku qabtan.
Waxa imaka Xogahaye ka ah uruka OPEC Mr.Abdallah Salem el-Badri oo u dhashay dalka Libya waxana shaqada u qabsaday 2007.
Hadaba Wadamada kuu bahoobay Ururka OPEC ayaa badanka Xaddida waa soo sarka shidaalka .Qiimaha shidalkana wuxuu ku xidhan yahay inta Foosto ee shidaal aay soo saran wadamada OPEC.
Dalalka ugu keydka badan Shidalka (Reserve) :
1.Saudia Arabia 267 Billion Barrels/Day
2.Canada 179 Billion Barrels/Day
3.Iran 138 ,, ,, ,,
4.Iraq 115 ,, ,, ,,
5.Kuwait 104 ,, ,, ,,
6.UAE 98 ,, ,, ,,
7.Venezuela 87 ,, ,, ,,
8.Libya 41 ,, ,, ,,
9.Nigeria 36 ,, ,, ,,
Dalalka ugu soo Dejista badan (Import) :
1.USA 122,220 Barrels/day
2.Japan 5,097 Barrels/day
3.China 3438 ,, ,,
4.Germany 2483 ,, ,,
5.South Korea 2150 ,, ,,
6.France 1893 ,, ,,